Waxyaabaha Saameynta Ku Leh Sida Deg Deg Ah Boggaaga Ugu Dhexsoco Shabakadaada | Martech Zone
Sabtida, Maarso 13, 2021 Sabtida, Maarso 13, 2021 Douglas Karr
Waxaan la kulanay macmiil aragti leh maanta oo aan ka wada hadalnay waxa saameynaya xawaaraha xamuulka websaydhka. Waxaa jira wax dagaal ah oo ka socda internetka hadda:
Soo-booqdayaashu waxay dalbanayaan taajirnimo muuqaalka waayo-aragnimooyinka - xitaa muuqaalka kore ee muuqaalka kore-pixel. Tani waxay wadaa sawirro waaweyn iyo qaraarro sare oo buunbuuninaya cabirka muuqaalka.
Mashiinnada raadinta ayaa dalbanaya heer sare bogagga dhakhsaha badan in ay leeyihiin qoraal weyn oo taageeraya. Tani macnaheedu waa bytes qiimo leh ayaa lagu kharash gareeyaa qoraalka, maahan sawirro.
Maamulka raadinta waxaa wada content cajiib ah. Adiga oo aan la wadaagin waxyaabahaaga, waxaad xadideysaa awooddeeda aad ku abuureyso gadaal gadaal iyo tixraacyo ku saabsan waxyaabahaaga… hoos u dhigaya raadinta dabiiciga ah.
Waa ficil isu dheellitiran oo shirkad kasta leh, haddaba aan ku dhex soconno sida bogagga ay u rartaan iyo meelaha ay waddooyinku yaalliin.
Kaabayaasha - Kaabayaasha casriga ahi waxay u adeegsadaan faybar isku xirnaanta xawaaraha sare leh, darawallada adag ee gobolka, iyo CPU-yada xawaaraha sare ku shaqeeya si ay u socodsiiyaan qalabka marinnada, shabakadaha shabakadaha ku shaqeeya daruuraha, iyo keydadka macluumaadka. Ilaa iyo hadda, in boggaaga lagu marti geliyo qalab cusub xarun cusub oo leh isku xirnaan sarreysa ayaa bixin doonta natiijooyinka ugu fiican.
Xallinta Domain - Marka bog la codsado, bogga waxaa lagu xaliyaa iyada oo loo marayo server server. Codsigaasi waa mid deg deg ah, laakiin marwalba waad yare xiiri kartaa wax yar waqtiga codsiga adoo adeegsanaya a maareysay adeegga DNS.
Iskudhinta Macluumaadka - Nidaamka maareynta maaddooyinka casriga ah, waxaa lagama maarmaan ah in keydkaaga xog-ururin loo sameeyo si loo kordhiyo waqtiga ay qaadaneyso in la weyddiiyo oo laga jawaabo xogta booqashooyinka aan la qaban. Sidoo kale waa ficil wanaagsan in lagu martigaliyo keydka keydka adeegaha shabakada laakiin isla deegaanka.
Xajin Daarajin - Teknolojiyada ayaa u jirta in la geeyo adeegeyaal fara badan si ay ula wadaagaan culeyska dadka soo booqda oo dhan halkii ay ka dhigi lahaayeen in culeyska la wada saaro hal server. Tiknoolajiyaddani waxay bixisaa fursad ay ku sii wadato inay ku darto server dheeraad ah barkaddaada maaddaama dalabku sii kordhayo… mararka qaarkood waqtiga dhabta ah.
Codsiyada Bogga - Wadada ka dib markii ay domain su'aalo weydiiso nidaamka maareynta maareyntaada ama nidaamka ganacsiga si aad u hesho waxyaabaha ku jira. Tusmeynta xogtaada iyo qalabkaaga qalabka waxay saameyn ku yeelan karaan xawaaraha lagu soo celinayo waxyaabaha ku jira.
Bogga Caching - Inta badan server-yada waxqabadka sare waxay bixiyaan awood ay ku dhaafiyaan codsiga keydka oo ay ugu adeegaan waxyaabaha ku jira keydka.
Codsiyada Madaxa - Waxyaabaha ku jira bogga, sida caadiga ah waxaa jira ilo sida qoraallo iyo xaashiyo qaab ah oo la codsaday ka hor inta aan bogga lagu xirin biraawsarka. Ilaha badan ayaa kicin kara waqtiyada xamuulka ee boggaaga.
Qaybaha Bogga - Daalacashada ayaa si caadi ah codsiyo ugu soo celiya isla hal server markiiba. Haddii ay jiraan xayndaabyo badan ama subdomains, walxaha si isku mid ah ayaa loo codsan karaa. Shirkadaha qaar waxay gashadaan subdomains badan oo loogu talagalay qoraallada, xaashiyaha qaabka, iyo warbaahinta si looga faa'iideysto habka daalacayaashu u sameeyaan codsiyadaas. Haddii aad xaraysid qoraallo badan ama waraaqo qaabab ah, ku darista iyaga tirada ugu yar ee faylasha ayaa hagaajin doonta waxqabadka sidoo kale.
Network Delivery Content - Rumayso ama ha rumaysan, juqraafigu wuxuu door ka ciyaaraa waqtiga ay ku qaadanayso rarka bartaada. Hadaad udhowdahay adeegahaaga, waa deg deg. Haddii aad ka gudubto qaarad, way gaabis tahay. A CDN kala soo bixi kartaa sawiradaada gobol ahaan waxayna ugu adeegi kartaa si dhakhso leh dhagaystayaashaada.
riixo - Shabakadaha shabakadda ee lagu daro gzip compression ee ilaha webka, sawirada kuwaas oo ah isku buuqsan, qoraallada iyo CSS ee la jajabiyay si looga saaro meel bannaan oo dheeri ah dhammaantood waxay ku yeelan karaan horumar ballaadhan xawaaraha culeyska websaydhka.
Gaadiidka Ciladda - Maxaad ugu dhejineysaa sawirrada haddii curiyaha uusan dhab ahaan ka muuqan bog? Haddii aad ku aragto bartayada, sida aad hoos ugu rogayso bogga sawirrada ayaa la raraa mar haddii ay u baahan yihiin inay muuqdaan halkii ay ka wada ahaan lahaayeen hal mar. Raadinta caajiska ah waxay xawaareyn kartaa xawaaraha culeyska websaydhkaaga si weyn.
Raritaanka Asynchronous - Wax walba maahan in isla markiiba lagu raro bog. Walxaha sida badhannada wadaagga bulshada, tusaale ahaan, waxay si aan caadi ahayn u noqon karaan kuwo gaabis ah oo canshuur ka qaada biraawsarka. Adeegyada Maareynta Tag ayaa kaa caawin kara adoo raacaya kheyraadka ka dib marka bogga la dhammeeyo halkii laga gaabin lahaa.
Kicinta Mobilada - Naqshadeynta jawaabta leh ayaa ah, sida saxda ah, dhammaan cadhada xilligan xaadirka ah inay bixiso khibrado isticmaale oo isdaba joog ah iyadoon loo eegin aragtida qalabkaaga. Laakiin sidoo kale waxay yareyn kartaa daawashadaada moobiilka - halkaasoo boqolleyda sii kordheysa ee booqdayaashu imaanayaan.
Foomamka Fiidiyowyada - Haddii aad ku darto asalka fiidiyowga bartaada, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inay yihiin kuwo la isku habeeyay oo la isku cadaadiyay biraawsar kasta. Fiidiyowga tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah uga qaadi doonaa.
Waa kuwan sawir cusub oo la sii daayay Ku bilow caqli gal ku saabsan sida websaydhadu u noqdeen baruur badan, iyo saamaynta.
Tags: rarista asynchronousriixoshabakada bixinta nuxurkaCSSxalinta domainkagzip compressionmadaxcodsi madaxmaktabadaha martigaliyayfaafidda sawirkarar caajis ahxoojinta xawaarahaxawaaraha xamuulkajeer loadhagaajinta mobiladaxajinta boggawalxaha boggacodsi boggawaxqabadkaxawaaraha xamuulka goobtaxaashida qaabkawaraaqaha qaababkacadaadiska fiidiyowgaqaabab muuqaal ahwaxqabadka webkaxawaaraha xamuulka websaydhkawebsaydhka xamuulka
Waa Maxay Shabakada Bixinta Waxyaabaha (CDN)?
Aug 6, 2015 at 11: 13 AM
Waan ku raacsanahay dhamaan 12ka qodob ee la tilmaamay.
Kordhinta taraafikada websaydhka, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad ka guurto martigelinta la wadaago ee loo gudbiyo VPS ama WordPress martigelinta, halka raac wixii kor ku xusan.